Finance(Finance) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
विन नेपाल लघुवित्तको वार्षिक साधारणसभा बस्ने मिति परिवर्तन, अब कहिले ?
काठमाण्डौ । विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो सातौँ वार्षिक साधारणसभा बस्ने मिति परिमार्जन गरेको छ। संस्थाको सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा अब जेठ ३१ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। सभा सिन्धुपाल्चोकको फटकशिला–८ स्थित इन्द्रावती सामुदायिक सेवा केन्द्रमा बिहान ११ बजेबाट हुनेछ। वार्षिक...
काठमाण्डौ । किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो तेस्रो वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। संस्थाको सञ्चालक समितिको वार्षिक साधारणसभा यही जेठ २८ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा कैलालीको धनगढीमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि प्रस्तावित चुक्तापुँजीको २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने विशेष...
काठमाण्डौ । इक्रा नेपाल लिमिटेडले समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड लाई विगतमा प्रदान गरेको निष्कासनकर्ता रेटिङ (इक्राएनपी–आईआर) सीलाई (इक्राएनपी–आईआर) बी माइनसमा अपग्रेड गरेको छ। उक्त रेटिङ प्राप्त गर्ने निकाय समयमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्न चुक्ने सम्बन्धमा उच्च जोखिम रहका मानिन्छन्। रेटिङ वर्ग (इक्राएनपी–आईआर) एएदेखि...
गोर्खाज फाइनान्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, के–के छन् अजेन्डा ?
काठमाण्डौ । गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडले आफ्नो २७ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो जेठ २७ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको बानेश्वरस्थित अनुपम फुडल्यान्ड एन्ड ब्यांक्वेटमा बिहान ११ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावली...
काठमाण्डौ । मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा पुनः सत्यदेव राउत नियुक्त भएका छन्। संस्थाको सञ्चालक समितिको जेठ २ गते सोमबार बसेको बैठकले सीईओमा पुनः राउतलाई नियुक्त गरेको हो। योसँगै राउतको कार्यकाल पुनः ४ वर्षका लागि थपिएको छ। राउतले विगत ४ वर्षमा मधेश प्रदेशका सबै जिल्लामा शाखा सञ्जाल...
जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको वार्षिक साधारणसभा जेठ २८ मा, लाभांश नबाँड्ने
काठमाण्डौ । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो तेस्रो वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ। संस्थाको सञ्चालक समितिको जेठ १ गते बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही जेठ २८ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा रुपन्देहीको बुटवलमा हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रत...
विन नेपाल लघुवित्तको लाभांश संशोधन, वार्षिक साधारणसभा पनि आह्वान
काठमाण्डौ । विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्ताव लाभांशमा संशोधन गरेको छ। संस्थाको सञ्चालक समितिको वैशाख २९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश संशोधन गरेको छ। संशोधित लाभांशअनुसार अब संस्थाले साविकको नेपाल सेवा लघुवित्त र विन लघुवित्त आपसमा गाभिएपछि कायम चुक्तापुँजी ७ करोड २४ लाख...
काठमाण्डौ । फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तेस्रो त्रैमासमाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाले ७० करोड ९१ लाख रुपैयाँ बढी खु्द नाफा आर्जन गरेको छ। यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ९६.१३ प्रतिशतले बढेको हो। गत वर्ष यही...
गोर्खाज फाइनान्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडले आफ्नो २७ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो जेठ २७ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको बानेश्वरस्थित अनुपम फुडल्यान्ड एन्ड ब्यांक्वेटमा बिहान ११ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक...
काठमाण्डौ । सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाले २ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बढी खु्द नाफा आर्जन गरेको छ। यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ६४.६८ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले १...
तेस्रो त्रैमाससम्म नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको कस्तो छ वित्तीय अवस्था ?
काठमाण्डौ । नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाले १६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बढी खु्द नाफा आर्जन गरेको छ। यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १५.५५ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले...
सञ्चालन मुनाफा घट्दा छिमेक लघुवित्तको नाफा प्रभावित, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाले ७१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बढी खु्द नाफा आर्जन गरेको छ। यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २४.९९ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले ९५ करोड...
डिप्रोक्स लघुवित्तको नाफा १५.८३%ले घट्दा अन्य सूचक कस्ता ?
काठमाण्डौ । डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाले ४३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बढी खु्द नाफा आर्जन गरेको छ। यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १५.८३ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले ५१...
साना किसान विकास लघुवित्तको नाफामा सामान्य बढोत्तरी, एनपीएलमा सुधार
काठमाण्डौ । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म संस्थाले ५० करोड २२ लाख रुपैयाँ बढी खु्द नाफा आर्जन गरेको छ। यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ८.९० प्रतिशतले बढेको हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म...
युनिक नेपाल लघुवित्तको नाफा घट्यो, अन्य सूचक कस्ता ?
काठमाण्डौ । युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थाले ७ करोड २७ लाख रुपैयाँ बढी खु्द नाफा आर्जन गरेको छ। यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ८.४९ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले ७...